“महिलाको भाग्य ओठबाटै थाहा हुन्छ तर कसरि ? हेर्नुस भिडियो सहित “ – Krazy NepaL
“महिलाको भाग्य ओठबाटै थाहा हुन्छ तर कसरि ? हेर्नुस भिडियो सहित “
November 16, 2020 698
महिला र पुरुष दुबैको ओठको आकार हेरेर गोप्य कुरा थाहा पाउन सकिने तरिकाहरु एक अध्ययनले बताएको छ ।गुलाबी ओठः जो व्यक्तिको ओठको रङ गुलाबी हुन्छ, उनीहरु कुशल व्यवहार, उदार र बुद्धिमान स्वभावका हुने गर्दछन् । यस्ता ओठ भएका मानिसहरु आफ्नो व्यवहारले सबैको मनलाई पगाल्न सक्दछन्। उनीहरुको साथी पनि धेरै हुने गर्दछन् ।
मोटो ओठः जो व्यक्तिको ओठ सामान्यभन्दा अलि मोटो छ भने उनीहरु रिसाउने प्रकृतिका हुन्छन्। यस्ता मानिसहरु सानो-सानो कुरामा पनि रिसाउने गर्दछन् । कहिलेकाहीँ यिनिहरुको रिसले उनीहरुलाई तनावमा पनि पार्ने गर्दछ । यिनिहरु भावनात्मक र जिद्दि स्वभावका हुन्छन् ।
ओठमा कोठी छ भनेः यदि कुनै व्यक्तिको ओठमा कोठी छ भने यस्ता व्यक्तिहरु निकै का’मुक स्वभावका हुने गर्दछन् । विपरित लिंगप्रति यिनिहरुको मनमा थुप्रै प्रकारको कामुक विचार आउने गर्दछन् । यस्ता मानिसहरु अरु मानिसहरुलाई चाँडै नै प्रभावित गर्न सक्षम हुने गर्दछन्। यदि ओठको ठिक मुनि कोठी छ भने यस्ता मानिसहरु कठिन परिश्रम गर्ने गर्दछन् र सजिलै सँग धन कमाउन सक्दैनन्। यस्ता मानिसहरुले कठिन परिश्रमपछि मात्र धन कमाउने गर्दछन्।एजेन्सीको सहयोगमा
Prev” बिद्रोही विप्लब समूह र प्रहरीवीच संखुवासभाको चैनपुरमा गो ली हानाहान शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहित ६० सुरक्षाकर्मी परिचालन”
Next“रमेश र कल्पनालाई विवाहको स्वीकृति दिइन रमेशको आमाले; कल्पना लाजले भुतुक्कै (भिडियो हेर्नुस्)”